Hubzilla 5.0 inosvika pamwe neshanduko dzemukati, rutsigiro rweZot6 uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mushure memwedzi mipfumbamwe yekuvandudza se yakaratidza kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yepuratifomu yekuvakwa kwenzvimbo dzakasarudzika dzemagariro Hubzilla 5.0. Iyi vhezheni itsva inouya nedzimwe shanduko dzakakosha dzemukati, senge shanduko kune yazvino vhezheni yeZot IV protocol, pamwe neshanduko mukushandisa kweakananga meseji inowirirana neActionPub
Kugovana nemamwe maFediverse network inotsigira ActivityPub, Diaspora, DFRN uye OStatus protocols.
1 Main nyowani maficha eHubzilla 5.0
Main nyowani maficha eHubzilla 5.0
Iyo itsva vhezheni yeHubzilla inomiririra shanduko ku yazvino vhezheni yeprotocol Zot IV, iyo fomati yekuchinjisa dhata yave kutsigirwa zvizere iine ActivityStreams kududzirwa.
Kunyangwe zvichitaurwawo kuti nekuda kweyekuvandudza kune zot6 protocol, pane zvimwe zvinokanganisa, zvakadai se:
Kwayedza RSS feeds haizopihwe federated kuburikidza zot6 kunze kwekunge sarudzo "Yekutumira mberi neiyi chiteshi semunyori" sarudzo yasarudzwa. Vanyori havazi vatambi vanoshanda.
Asinga zivikanwe makomendi haazopihwe federated kuburikidza zot6.
Kuchengeta munharaunda kwave kuremadzwa. (ichagadziriswa gare gare)
Iyo chess plugin yaendeswa kune isingatsigirwe plugins kudzamara yaendeswa kune iyo ActivityStreams2 dhata fomati.
Uyewo zvinokurudzirwa kushandura kushandisa yakananga meseji mashandiro ActivityPub inoenderana, inoratidzwa mukuyerera kwakawanda panzvimbo peyaimboshandiswa mameseji epachivande
Iko kushanda kwemeseji meseji yekudyidzana nevashandisi veDiaspora network kunoramba kuripo uye yakaendeswa kune imwe yoga "Mail" yekuwedzera. Uyewo, iyo yekuvhota uye yekuvhota system yakagadziridzwa kutsigira akawanda sarudzo uye zvakare inotsigira imwecheteyo mashandiro muActivityPub manetwork.
Zvakare, zvimwe zvekuchinja kunozivikanwa mushanduro nyowani zvinosanganisira:
Iyo yekuzivisa system yakachinjwa kuti ishandise Server Sent Zviitiko (SSE).
Zvinyorwa zvakapetwa zvinoitwa pane peji yechiteshi.
Wakawedzera mashandiro ekufananidza makarenda eDAV nemabhuku ekunyorera ane matombo.
Yakagadziridzwa yekupedzisira-kumagumo (E2E) kunyorera kwemaposi uchishandisa PSK.
Iwo ekuwedzera uye asingatsigirwe ekuwedzeredzwa akaendeswa kune yakasarudzika dura.
Kwakawanda kugadziridzwa kwakaitwa kutsigira mapato echitatu-bato uye kutumira zvemukati kune akakurumbira masocial network.
Uyewo, mugadziri mukuru weHubzilla, Mario Vavti, yakazivisa kuti mari yekuwana NGI0, Muridzi wekambani inozivikanwa yeNLnet, yakabvumidza rubatsiro rwekusimudzira ramangwana kweHubzilla. Iko kukoshesa kwekuedza kuchave kwekuvandudza maficha uye nzira dzekudyidzana kwevashandisi nesisitimu.
Kana zvakadaro Kuisirwa Hubzilla kuri nyore chaizvo senge kana iwe waisa WordPress, Drupal, Jumla, nezvimwe. Kuisirwa Hubzilla kuchave nyore kwazvo. Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Hubzilla yakagadzirirwa kuiswa pamaseva, kunyangwe yekiti kits, tunogona kutsigira LAMP kufambisa iyo yekuisa maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Hubzilla 5.0 inosvika pamwe neshanduko dzemukati, rutsigiro rweZot6 nezvimwe
Wadii kushandisa mharidzo uye chii chakavhurika sosi maturusi kutsiva iwo